Chelsea Oo Gool Xilli Dambe Yimid Ku Ciqaabtay City – Garsoore Sports
Chelsea Oo Gool…
Kooxaha Manchester City Iyo Chelsea ayuu kulan xiiso leh ku dhexmaray garoonka Etihad Stadium ee kooxda Cityzen fiidnimadii caawa.
Manchester City ayaa lumisay fursad ay ku soo gabagabeyn laheyd tartanka horyaalka Premier League 2020-21 oo haddii ay adkaan lahaayeen ka dhigi lahayd mid loosii caleemo saaro horyaalnimada.
Kooxda Chelsea ayaa looga hormaray hoggaanka kulanka kaddib markii uu Raheem Sterling dhammaadkii qeybtii hore u dhaliyay goolka lagu kala nastay kahor inta uusan Hakim Ziyech barbareynin qeybtii 2aad iyadoo dhammaadkii cayaartana uu Marcos Alonso u dhaliyay Chelsea goolka guusha labo daqiiqo markii lagu daray 90kii daqiiqo ee cayaarta loogu talagalay.
Gabriel Jesus ayaa caawiyay goolka keliya ee City daqiiqadii 44aad ee dhammaadkii qeybtii hore markii uu karoos soo dhex dhigay diilinta ganaaxa, kubbadii loogu talagalay Sergio Aguero ayaa taabasho xun oo isaga ka timid waxay u sahashay inay gasho cagaha Sterling oo shabaqa ku hubsaday.
Aguero ayaa fursad u helay inuu qaladkiisa kasoo kabsado seddex daqiiqo kaddib markii qalad uu sameeyay Billy Gilmour rigoore uu ku helay.
Si kastaba ha noqotee, wuxuu isku dayay inuu goolhaye Mendy ka dhaliyo nooca rigoorada loo yaqaano Panenka ee jafta ah waxaana goolhayaha Chelsea u suuragashay inuu si caadi ah u istaago oo uu qabto laadkii Aguero. Rigooradan uu Aguero qasaariyay ayaa ah tiisii ugu horreysay ee Premier League-ga ee Garoonka Etihad taniyo bishii Oktoobar 2016.
Xoogaha kaddib,City ayaa iska illowday fursadii uu qasaariyay Aguero balse walwal ayaa lasoo darisay markale kaddib markii uu xiddiga Kooxda Chelsea ee Hakim Ziyech uu cayaarta barbarro ka dhigay.
Christian Pulisic iyo Cesar Azpilicueta ayaa si quruxbadan isagu baastay kubbada kahor inta aanu kabtanka Chelsea usii gudbin Ziyech kaasoo kubbad joog hoose ah ka dhaliyay goolhaye Ederson.
Chelsea ayaa kubbado la heshay shabaqa laba jeer kahor dhammaadkii cayaarta iyadoo Timo Werner iyo Callum Hudson-Odoi labaduba goolal looga diiday garabdhaaf 15-kii daqiiqo ee ugu dambeeyay.
Chelsea ayaana sidaasi ku adkaatay kulankii caawa.
Manchester City Fursadan way lumiyeen hayeeshee waxay ku guuleysan karaan horyaalka haddii ay Manchester United guuldarro kasoo gaarto kooxda Aston Villa oo ay Axadda berrito ah balansanyihiin.
”Iib Ma’aha” – Mourinho Oo Niyadjab Kala Kulmay Kooxdii Ceyrisay Ee Tottenham Oo Uu Labba Xiddig Ka Doonayo